ဝါးခယ်မ : နက်နဲသော နိုင်ငံတကာ တစ်ကွက်ကာတွန်းများ
နက်နဲသော နိုင်ငံတကာ တစ်ကွက်ကာတွန်းများ
စာမဲ့ ကာတွန်းတွေဟာ ဘယ်နိုင်ငံ ၊ ဘယ်လူမျိုးမဆို လိုက်တွေ.နိုင် ၊ လိုက်ခံစားနိုင်တာမို. သဘောကျစရာ ကန်.သတ်မဲ့ ဖန်တီးမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလိုကာတွန်းတွေဟာ ခောတ်ကို ၊ စနစ်ကို လှစ်ဟပြနိုင်တာမျိုး ၊ အတွင်းကျကျဖော်ပြတာမျိုး ၊ သရော်တာမျိုး စသဖြင်. အစွမ်းသတ္တိတွေရှိပါတယ် ။ ခုကာတွန်းလေးတွေကတော. ကိုဥာဏ် - ပန်းလောင်မြေ စုစည်းပြီး သူ.ရဲ. မြန်မာ.သွေး ဘလော.မှာ ဦးနှောက် မုန်တိုင်း ဆင်စေသော ဖန်တီးမှုများ ခေါင်းစဉ် နဲ.တင်ဆက်ထားတာလေးတွေကို သဘောကျတာကြောင်.ပုံတွေကိုရော သူ.ရဲ. အတွေးအခေါ်လေးတွေကိုပါ ( လေးစားစွာဖြင်. ) ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
တစ်ခါတရံမှာ အာဏာရှင်တစ်ယောက်ကို ဖြုတ်ချလိုက်တာဟာ အခြားအာဏာရှင်တစ်ယောက်ကို ပေါ်ထွန်းလာစေတယ်လို့ ဆိုလိုချင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ပတ်လည်တတ်တဲ့ နိုင်ငံရေး အစဉ်အလာတွေကိုပဲ ရည်ညွှန်းချင်သလား။
ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ဘ၀မှာ Facebook ရဲ့ အသုံးဝင်မှု၊ အရေးပါမှုက ငြင်းမရတဲ့ အချက်တစ်ခု ဖြစ်လို့လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကာရော အလွန်အကျွံ အားထားလွန်းနေတယ်လို့များ ဒီပုံကို ဖန်တီးသူက ဆိုလိုချင်သလား။ တံခါးပေါက်ကလည်း စေ့ရုံလေးပဲ ကျန်တော့တယ်။ အဲဒါလေးကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ တကယ့်အပြင်လောကကြီးကို ကိုယ်တွေ့မျက်မြင် ကြုံရမှာဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တွေက အတွင်းထဲမှာပဲ လှောင်ပိတ်မိနေပြီး တံခါးလေးတစ်ချပ်ပဲခြားတဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာကို FB ကနေ တစ်ဆင့်များ ကြည့်နေကြသလားဗျာ။
ရပ်နေတဲ့လူက ဘာကို ကိုယ်စားပြုတယ်၊ ကျွဲက ဘာကို ကိုယ်စားပြုတယ်၊ ဒုံးလက်နက်က ဘာကို ကိုယ်စားပြုတယ်၊ မုန်လာဥနီက ဘာကို ကိုယ်စားပြုတယ် စတာတွေကို အထူးအထွေ ရှင်းပြစရာ မလိုတာမို့ ဒီပုံက ပေးချင်တဲ့ message က ဘာလဲဆိုတာ...။
ဘယ်နိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ယေဘုယျအားဖြင့် အခုပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူးလေ။ တုတ်ကိုင်ထားတဲ့ သိုးကျောင်းသား ရှိနေသလို၊ တစ်ခုခု အမှားအယွင်း လုပ်တာနဲ့ သခင့်အလိုကျ ပြေးကိုက်ပေးမယ့် သိုးထိန်းခွေးကလည်း အရန်သင့် ထိုင်စောင့်နေတာကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လိုက်မိပါတယ်။
ကောင်းဘွိုင်ဆိုတာ အမေရိကန်ရဲ့ သရုပ်သကန်။ ကုလားအုတ်စီးနေတဲ့ အာရပ်တွေကတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကို ပြောချင်တာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အတွက် အာရပ်ကမ္ဘာကို အသည်းအသန် အာရုံစိုက်နေတဲ့ အမေရိကန်တို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို သရော်ချင်တယ်လို့ မြင်မိကြောင်းပါ။
အင်တာနက်ရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခုလို့ ပြောနိုင်တဲ့ @ လေးကို နေမင်းသဖွယ် ရေးဆွဲပြထားတာက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ အင်တာနက်က လူတွေကို အလင်းရောင်ပေးနေတယ်လို့ ဆိုလိုချင်သလား။ အဲဒီ အင်တာနက်ကမ္ဘာကို ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ အတားအဆီးတွေ၊ အပိတ်အဆို့တွေ၊ အဖြတ်အတောက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုလိုချင်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ်ခွင့် မရဘဲ အချိန်မရွေး ဖြတ်တောက်ခံရနိုင်တယ် ဆိုတာကိုများ ပြောချင်တာလား။ အချို့တွေကတော့ ဒါဟာ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုနဲ့ အမျိုးသား လုံခြုံရေးကို သရုပ်ဖော်ချင်တာလို့ ဆိုကြပြန်တယ်။ အဲဒါဆိုရင် အစောင့်အကြပ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်လို့ စစ်သားပုံကို သရုပ်ဖော်ထားတာလဲလို့ ကျွန်တော်က ပြန်မေးချင်မိပါရဲ့။ တွေးလို့ကောင်းတဲ့ ပုံတစ်ခုပါပဲ။
အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း အဲဒီလို ဖြစ်နေလို့သာ ဒီလို သရုပ်ဖော်တယ်လို့ ကျွန်တော်က မြင်မိပါတယ်။ မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က မြန်မာ့အရေးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး တွေးမိပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာ တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ မှန်သည် မှားသည် နောက်မှာထား အရင်ဆုံး FB ပေါ် ရောက်သွားတော့တာပါပဲ။ တစ်ခါတလေမှာ အဲဒီ အကြောင်းအရာတွေက မူလအဖြစ်အပျက်နဲ့ လုံးလုံး အံချော်သွားတဲ့အထိ ချဲ့ကားသွားတတ်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေ ဆိုးကျိုးတွေကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ အာရပ်နွေဦးဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလို့ ပညာရှင်အချို့က သုံးသပ်ကြတာကိုလည်း ဒီပုံကိုကြည့်ရင်း ပြန်သတိရမိပါတယ်။ အချို့တွေကတော့ Facebook ဟာ တစ်ခါတရံမှာ လူတွေကို အထိနာစေတယ်၊ ထိခိုက်စေတယ်လို့ ပြောချင်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တွေးစရာလေးပါ။
နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေကို သရော်ချင်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ကတိစကားတွေ၊ ပြောစကားတွေဟာ ဘာမှ အဖိုးမတန်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေပဲလို့ ဆိုလိုချင်ဟန် ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေ ဘာပဲပြောင်ပြော နောက်ဆုံးတော့ မြောင်းထဲရောက်ကုန်တယ်လို့များ ဆိုလိုချင်သလား မသိပါဘူး။
မြန်မာစကားပုံ (((ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေဖုံး))) ဆိုတာနဲ့များ ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်မလား မသိပါဘူး။ နိုင်ငံကြီးတွေဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စေမယ့် အပြုအမူတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်နေပေမယ့်လည်း အများအမြင်မှာ အဲဒီလို မထင်ရအောင် မီဒီယာတွေကတစ်ဆင့် ပုံပြောင်းပြီး လိမ်ညာနေကြတယ်လို့ ဖန်တီးသူက ပြောချင်သလား တွေးနေမိကြောင်းပါ။
ဒီပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အမြင်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြပါတယ်။ တချို့ကလည်း နိုင်ငံတွေက ပိုက်ဆံတွေကို စစ်ပွဲတွေအတွက် အဓိက သုံးနေကြတာကို ဖော်ပြချင်တာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ အချို့ကတော့လည်း ဒါဟာ အမေရိကန်ရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို ဖော်ပြတာတဲ့။ သူတို့တွေ ပြောကြတာကတော့ အမေရိကန်ဟာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေ အများဆုံး တင်ပို့ရောင်းချပြီး သူ့နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို ကျားကန်ထားရတာတဲ့။ အဲဒါကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာကို အားပေးတာဟာ စစ်ကို အားပေးတာနဲ့ အတူတူပဲလို့ ဆိုကြတယ်။ သူတို့တွေက သူတို့အမြင်နဲ့သူတို့ တွေးကြသလို ကျွန်တော်တို့လည်း ကျွန်တော်တို့ဘာသာ တွေးကြတာပေါ့ဗျာ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို ဖော်ပြချင်တယ်လို့ အများစုက လက်ခံကြတယ်။ သစ်ပင် သစ်တောတွေနဲ့ ရေဆိုတာ အမြဲတမ်း စည်းနှောင်ထားတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တယ်လို့ အများစုက မြင်ကြပါတယ်။ ရေဆိုတာ သက်ရှိလူသားတွေရဲ့ ပြယုဂ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေမရှိတဲ့အရပ်ဟာ သက်ရှိ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ပုံမှာ ပြထားတာက လွင်တီးခေါင်ပြင်ထဲမှာ ထီးတည်းကြီး ဖြစ်နေတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်ရယ် ရေငုတ်တစ်ခုရယ် ဖြစ်နေတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဖန်တီးသူ ပြောချင်တာက အခြားအဓိပ္ပါယ်များ ဖြစ်နေလေမလားလို့လည်း တွေးမိပါတယ်။
အချိန်နာရီတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သင်္ချိုင်းကို စက္ကန့်နဲ့အမျှ တူးနေတယ်လို့ သတိပေးချင်တာများလားဗျာ။ လူတိုင်း မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ ဒီလမ်းကို သွားဖို့အတွက် စက္ကန့်နဲ့အမျှ နီးကပ်လာနေပြီလို့ ဆိုလိုချင်တယ် ထင်ပါရဲ့။ တရားသဘောပါတဲ့ ဖန်တီးမှုလေးလို့ ထင်မိပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ အဓိကနဲ့ သာမညကို ခွဲခြားမသိတော့တာကိုများ ဆိုလိုချင်သလား။ ဆေးသုတ်တံကိုင်လျက် ပြုတ်ကျသေဆုံးနေတဲ့ လူသာူးကို ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားနိုင်ဘဲ မှောက်သွားတဲ့ ဆေးပုံးကို အလေးထားနေကြပုံက တွေးစရာပါ။ နောက်တစ်ခု ကျွန်တော် တွေးမိတာက အပြာရောင်ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့သရုပ်သကန်ပါ။ အနီရောင်ကတော့ စစ်ပွဲတွေ၊ အနိဌာရုံတွေရဲ့ သင်္ကေတပေါ့။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးက ငြိမ်းချမ်းရေး ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုပြီး အသည်းအသန် ဆွေးနွေးကြ၊ အဖြေရှာကြ လုပ်နေကြပေမယ့် တကယ်တမ်း စစ်ပွဲတွေကြောင့် သေဆုံးရသူတွေ ခံစားရသူတွေကို လျစ်လျူရှု မေ့လျော့နေကြတာကိုများ သတိပေးချင်တာများလားလို့ပါ။ ကျွန်တော့်အတွေး သက်သက်ရယ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရော အဲဒီလိုမျိုး ကိုယ့်အခွင့်အရေးတွေကို ကိုယ်တိုင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီး တဒင်္ဂ အဆင်ပြေဖို့အတွက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေကြသလားလို့ မေးခွန်းထုတ်မိပါတယ်။
အောက်ခြေမှာ ပြထားတာက စစ်ပွဲတွေရဲ့ သရုပ်သကန်...တင့်ကားတွေ၊ အမြောက်တွေပေါ့။ အဲဒီ စစ်ပွဲတွေကနေ သေဆုံးသူတွေကို စားမယ့် ၀ါးမယ့် အကောင်တွေက သစ်ပင်ပေါ်မှာ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဠင်းတကြီးတွေ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးငှက်ကလေးခမျာ စစ်ပွဲတွေကြောင့် မလုံမခြုံ ဖြစ်နေရရှာတာကို အသားစား ဠင်းတကြီးတွေက အကာအကွယ် ပေးထားပုံက ရယ်ချင်စရာတောင် ကောင်းပါသေးရဲ့။ လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာ အရေးတွေကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုလေ့လာသူတွေ ဆိုရင်တော့ ဒီပုံလေးဟာ အင်မတန်မှကို သဘောကျစရာ၊ တွေးစရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Oroginal Blog ; http://myanmarthway.blogspot.com/
Posted by ဇာမဏီ at 12:39 PM
ရုပ်/စည်း ရွေးကောက်ပွဲ မှသူတို.ပြောသမျှ
ရုပ်/စည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဂယက် ( ၂ )
ရုပ်/စည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဂယက် ( ၁ )
ဦးဝီရသူ - ယန်ဟီးလီ နှင်. နိုင်ငံတကာသတင်းဋ္ဌာနများ
သင်္ဂဟမေတ္တာ အလှုဒါန - ၀ါးခယ်မ အဖွဲ.၏ မူဝါဒ နှင်. စီ...
သင်္ဂဟမေတ္တာ - ၀ါးခယ်မ တာဝန်ခံအဖွဲ.
ရုပ်/စည်း ရွေးကောက်ပွဲကမစသေး အသံကထွက်လာပါပြီ
လူပြောများနေတဲ့ The Daily Duty အနုပညာဖန်တီးမှု
သင်္ဂဟ မေတ္တာ အလှု ဒါန - ၀ါးခယ်မ စတင်ဖွဲ.တည်ခြင်း
ဦးနု စာကြည်.တိုက် က Mini - E Library ( သို. ) Pu...
ထူးအယ်လင်း ရဲ. နောက်ဆုံးချစ်သူ
မောင်ချောနွယ် ထုဆစ်တဲ့ ရေထဲမြို. - ၀ါးခယ်မ
ဧရာဝတီကို နိုင်ဖို.ကို .....................